‘भाईरल भैदियो’ र ‘दिलको भित्तैमा’ बिच को अगाडी ? « Ramailo छ
‘भाईरल भैदियो’ र ‘दिलको भित्तैमा’ बिच को अगाडी ?
बेला ट्रेन्डिङको छ । यतिबेला चाहिं नेपाल युटुव ट्रेन्डिङमा कुन कुन भिडियो छन् त ? रमाईलो मान्नुपर्छ, यतिबेला दुई नेपाली भिडियोहरु ट्रेन्डिङको अग्रस्थानमा छन् । सलमान खानको ‘टाईगर जिन्दा है’ को ट्रेलर लाई तेश्रो स्थान झार्दै दुई नेपाली म्युजिक भिडियो ट्रेन्डिङ एक र दुई नम्वरमा छन् । ट्रेन्डिङको दश मध्ये ८ वटा त नेपाली भिडियोहरु नै छन् ।
अब कुरा गरौं ट्रेन्डिङ एक र दुईमा पर्न सफल भिडियोहरुको । यस पालिको टे्रन्डिङमा रोचकता देखिएको छ । चर्चित डान्स ग्रुप कार्टुन क्रुजबाट अलग्गिएका सविन कार्कीले बनाएको ‘भाईरल भैदियो’ गीतको भिडियो ट्रेन्डिङ एक मा पर्दा कार्टुन क्रुजकै ‘दिलको भित्तैमा’ दोश्रो ट्रेन्डिङमा छ । ‘भाईरल भैदियो’ भिडियो :
सविन कार्कीको निर्देशन रहेको ‘भाईरल भैदियो’ र सरोज अधिकारीको निर्देशन रहेको ‘दिलको भित्तैमा’ को भिडियोलाई सोमबार बिहानसम्म क्रमश: ७ लाख २६ हजार र ७ लाख २५ हजार ५ सय बढीले हेरेका छन् । यसले के देखाउँछ भने सविन कार्की र कार्टुन क्रुज दर्शकमा उत्तिकै लोकप्रिय छन् । ‘दिलको भित्तैमा’ भिडियो :